ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း ကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး/UNDP ဌာနေကိုယ်စားလှယ် မစ္စ လော့ဒက်ဆဲလ်လီယန် နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း သည် ကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး/UNDP ဌာနေကိုယ်စားလှယ် မစ္စ လော့ဒက်ဆဲလ်လီယန် နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ညနေ(၄)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Ann Ollestad အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Ms. Ann Ollestad အား ယနေ့နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ၊ ဇမ္ဗူသီရိဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
၁၃-၁-၂၀၁၄ ရက် ၁၃၀ဝ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ နဝမပုံမှန်အစည်းအ‌ဝေး(ပထမနေ့)တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း‌ပြောကြားသည့် ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား ၂၀၁၄ ခု၊ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာပါ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်ထောင်စုသား အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်ဟာ ပထမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ နဝမပုံမှန် အစည်းအ‌ဝေးရဲ့
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအောင်မြင်ရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အပူပြုနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပုသိမ်မြို့၌ရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းအောင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်စိုး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင်
လွှတ်တော်အသီးသီး၏ နဝမပုံမှန် အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရေးလုပ်ငန်းညှိုနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် လွှတ်တော်အသီးသီး၏ ပထမအကြိမ် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးများ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက် နံနက် (၉) နာရီခွဲတွင် လွှတ်တော်ဝင်းအတွင်းရှိ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း ဖျာပုံ-မအူပင် ခရီးစဉ်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ သူရဦးရွှေမန်းသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးနိုင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Ichiro AISAWA နှင့် Liberal Democratic Party (LDP), Democratic Party, Japan Restoration Party တို့မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ဇမ္ဗူသီရိ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၄) ကို ဇန်နဝါရီလ (၇)ရက်နေ့ နံနက် (၁၀)နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်(D)ဆောင်၊ ဒုတိယထပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။